तिलोत्तमा गोल्डकप फाइनल – पुलिस र दाउफिन्स कसले मार्ला बाजी ? | Hamro Khelkud
तिलोत्तमा गोल्डकप फाइनल – पुलिस र दाउफिन्स कसले मार्ला बाजी ?
आइतबार, फागुन १२, २०७५
दिपक न्यौपाने ,बुटवल
तिलोत्तमा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि नेपाल पुलिस क्लबले क्यामरुनको दाउफिन्स एफसीबीच सोमबार प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । दाउफिसन्सले यो सिजन दुई नकआउट उपाधि जितेको छ भने पुलिसले सर्वाधिक पुरस्कार राशीको सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको थियो ।
दाउफिन्स बुटवल पुग्नुअघि मनकामना केबुलकार पोखरा कप र धरानको बुढासुब्बा गोल्ड कपको उपाधि जितेको थियो । पुलिस र दाउसफिन्सबीचको खेल एन्फा टेक्निकल सेन्टर देविनगरमा दिनको दिउँसो २ः३० बजे सुरु हुने आयोजक रुपन्देही जिल्ला फुटबल संघले जनाएको छ ।
अहिले सम्म ५ पटकसम्म तिलोत्तमा गोल्डकप फुटबलको उपाधि जितिसकेको पुलिस सिजनको दोस्रो उपाधिका लागि आशावादी रहेको छ । उपाधि यात्रा तय गर्ने क्रममा पुलिसले सेमिफाइनलमा ए डिभिजन प्रतिद्वन्द्वि च्यासल युथ क्लब ३–१ ले हराएको थियो । दाउफिन्सले आयोजक रुपन्देही ११ लाई २–० ले हराएको थियो ।
दाउफिन्सले बुढासुब्बा गोल्ड कप जित्ने क्रममा सेमिफाइनलमा पुलिसलाई टाइब्रेकरमा हराएको थियो । बुढासुब्बाको हारको बदला लिनेमा दाउमा पुलिस रहेको छ । टोलीका प्रशिक्षक अनन्त थापाले दाउफिन्स्लाइ हराउने विश्वास व्यक्त गरे ।
थापाले पुलिस दबाबमा नखेल्ने बताएक छन् । दाफिन्सका कप्तान एनगौलाले पुलिस टोलीको तारिफ गरे । यद्दपी आफ्नो टोलीको प्रदर्शनमा सुधार गर्दै उपाधि जित्ने आशा व्यक्त गरे ।
तिलोत्तमा गोल्डकपको विजेताले ८ लाख ८० हजार र दोस्रो हुने टोलीले ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । प्रतियोगिताका सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले स्कुटर प्राप्त गर्नेछन् भने विधागत उत्कृष्ट खेलाडीले समान २५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।